Ihe kpatara eji mepụta ihe nkiri | Martech Zone
Mụ na ụmụ m gara hụ Eze Kong ụnyaahụ. Mmetụta pụrụ iche na ihe eserese kọmputa wepụtara dị oke mma. Echere m na ezigbo ule nke ihe nkiri (nke na-adabere na nsonaazụ pụrụ iche) bụ ma ị ga-ahụ onwe gị na-egosipụta mmetụta agwa kọmputa ahụ. N'ezie, Kong nwere agwa nke ya. Echere m na njedebe bụ obere hokey ma adabaghị na mwute na ike nke obi otiti na njedebe ikpeazụ… mana njem ahụ ka dịkwa egwu.
Ewepụtara m ndị enyi 2 nke ụmụ m yana m ka oge 3+ na-efu m obere ihe. Kwọ ụgbọala ruo ụlọ ihe nkiri nkeji 20 tupu ihe nkiri ahụ amalite, ụmụaka m malitere ịsụ ude banyere ịbịa n'azụ oge na oche anyị ga-ahụ onwe anyị. ekwentị gị-apụ-nzuzu nkiri ”, nhụchalụ maka X-Men 45, ihe ọ aụ -ụ dị nro na nacho (nke nwere chiiz nke ga-eme ka ọ gafee Armageddon) azụmaahịa, yana nyocha 14 ọzọ nke ihe nkiri a na-emegharị
Ihe mechara mee ka ụmụ m chee na m bụ onye amụma. Ọ bụghị X-Men 45, ọ bụ X-Men 3. Poseidon, a remake nke mgbe-egwu Poseidon njem, Miami osoje, ma le… a akụ ohi (na a ighikota) nkiri na Denzel Washington.
-eme onye ọ bụla ọzọ na-eche ihe mere ndị fim ụlọ ọrụ na-a suụ? Hà na-eche n'ezie? N'ezie? Mgbe m na-aga ịhụ King Kong 3 (ọ bụrụ na ịfefe Mior Joe Young), ahụrụ m nhụchalụ nke Miami Vice (sans Don), Poseidon 3 (ọ bụrụ na ị gụọ nsụgharị TV izu ole na ole gara aga), X-Men 3, na ihe nkiri ohi n'ụlọ akụ ????
Nsogbu dị na ụlọ ọrụ ihe nkiri nkiri bụ na ọ bụ ụlọ ọrụ ‘ụlọ ọrụ’ ugbu a. Ọ bụ ụlọ ọrụ nwere ụyọkọ nwamba ndị nọ ọdụ na tebụl ejiri mee ijeri dollar na ndị na-atụ egwu ịkụ nzọ na ihe ọ bụla mana mmeri mmeri.
Ha na-ekwu na ndị na-amụghị akụkọ ihe mere eme ga-emeghachi ya. M na-amalite na-eche na ọ dịghị onye na America na-amụ akụkọ ihe mere eme ọzọ. Obodo a wuru na okwukwe na ihe egwu. Chọta m ụlọ ọrụ mere ya, ma kwenye na ha nwere nnukwu akụkọ banyere etu ha si dị otu anụ ọhịa site na mkpochapu kpamkpam.
The Movie Industry kwesịrị 'kewaa ya Pọtụfoliyo' ma ọ bụrụ n'ezie na ọ chọrọ ka ọ mee. Chọpụta… maka mfe ego na Shrek 5, Rocky 10, wdg. Ma na-amalite ego ọzọ 'mmalite-acha ọkụ'. Nwunye enyi m kachasị mma mepụtara ihe nkiri na 2004, akpọrọ Nwoke Na-enwe Mgbu natara Bravo! award na Toronto Film Festival… ị ga-eche na ndị folks na-akụda ọnụ ụzọ ya iji weta ụfọdụ onyinye!
Nope…. Echere m na anyị chọrọ Miami Vice na Poseidon.
Tags: Ntụrụndụ / Omenalaụlọ ọrụ nkiri